काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली उपभोक्ताहरु परेका छन्। पछिल्लो डेढ महिनामा भारतीय बजारमा करिब दुई दर्जनपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वतः बढ्न गएको छ।
तर, नेपाली उपभोक्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य वृद्धिबारे खास ज्ञान र सरोकार पनि नहुने हुँदा नेपाल आयल निगम दवावमा पर्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ दैनिक घटबढ हुने भए पनि निगमले भने अंग्रेजी मितिको १ तारिख र १६ तारिखमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दै आएको छ।
स्वचालित मूल्यप्रणाली के हो ?
विगतमा आफुखुशी पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य समायोजन गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले विसं. २०७१ सालमा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मुल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यसयता सोही कार्यविधिलाई आधार बनाएर मूल्य समायोजन हुदैँ आएको छ। अन्तराष्ट्रिय बजारमा आधारित भएर निगमले महिनाको २ पटक (१ र १६) तारिखमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ।
अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्टा समेत नेपालमा मूल्य नघटेपछि विद्यार्थी संगठन लगायतबाट विरोध र दबाव आउन थालेपछि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ ल्याएको हो। उक्त कार्यविधि अनुशार महिनामा २ पटक नयाँ मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । महिनाको २ पटक भन्नाले अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा समायोजन हुने भनिएको छ। आइओसीले महिनाको २ पटक नेपालमा नयाँ मूल्य पठाउदैँ आएको छ।
आइओसीले दिएको नयाँ मूल्यसूचिको आधारमा निगमले नेपालमा नयाँ मूल्य समायोजन गर्ने उल्लेख छ। उक्त निर्देशन अनुसार नै हाल मूल्य समायोजन हुँदै आएको छ। तर पहिलाको जस्तै निगमले मन लागेको अवस्थामा मात्र मूल्य समायोजन गर्ने गरेको छ।
उक्त कार्यविधिअनुसार निगमलाई २ प्रतिशत सम्म मूल्य बढाउन र घटाउने अधिकार छ। यदी २ प्रतिशतभन्दामाथि मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भएमा निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कार्यविधिमा आधारित भएर मूल्य समायोजन हुने गर्छ। हाल अन्तराष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी गिरावट आएतापनि नेपालमा खपत कम भएको भन्दै मूल्य समायोजन गरिएको छैन।
स्वचालित मूल्य प्रणाली र विशेषता
पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मुल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ (तेस्रो संशोधन) अनुसार नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य परल मूल्य बमोजिम महिनामा २ पटकसम्म समायोजन गरिनेछ। पेट्रोल र डिजेलमा परल मूल्यमा कम्तीमा ५ प्रतिशर र बढीमा १५ प्रतिशत नाफा राखी सोको मूल्य निर्धारण समितिले गर्नेछ। यसैगरी ग्यासमा २ प्रतिशतसम्म नाफा राख्न सकिनेछ।
मूल्य समायोजनको आधार र मापदण्ड
पेट्रोलियम पदार्थको आधार मूल्यको दुई प्रतिशत सम्मको घटीबढी अन्तरसीमा रहनेछ भने ग्यासको मूल्य अन्तरसीमा आधार मूल्यको प्लस माइनस रु २५ रहनेछ। सोहीअनुसार नै निगमले खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिनेछ।
स्वचालित मूल्य प्रणलीबाट मूल्य समायोजन गर्दा प्रति लिटर खुद्रा बिक्री मूल्यको अन्त्यमा १ पैसादेखि ५० पैसासम्म आएमा पचास पैसा र ५१ पैसादेखि ९९ पैसासम्म आएमा रु १ हुनेगरी शून्यान्तर गर्न सकिनेछ। सरकारले पेट्रोलमा ४२ रुपैयाँ ७३ पैसा, डिजेलमा २६ रुपैयाँ १५ पैसा, मट्टीतेलमा २ रुपैयाँ ८८ पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ २१ रुपैयाँ ५० पैसा, हवाई इन्धन अन्तराष्ट्रियतर्फ ११ रुपैयाँ १८ पैसा र एपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर दुईसय तीन रुपैयाँ २४ पैसा कर भन्सार बिन्दुमै असुल गर्छ।
मूल्य निर्धारणबारे निगमको नीति
नियमित रुपमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्नका लागि आपूर्ति, वितरण तथा एभिएन विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले नै मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ।
उक्त समितिमा नेपाल आयल निगम अन्तर्गतको आपूर्ति, वितरण तथा एभिएसन विभागका निर्देशक संयोजक, चाटर्ड एकाउण्टेट तथा निगमको अर्थ विभागका निर्देशक सदस्य र निगमको आपूर्ति, वितरण तथा एभिएशन विभागका प्रबन्धक वा उप प्रबन्धक सदस्य सचिव रहनेछन्। पेट्रोलियम पदार्थको आधार मूल्यको दुई प्रतिशत सम्मको घटीबढी अन्तरसीमा रहनेछ भने ग्यासको मूल्य अन्तरसीमा आधार मूल्यको प्लस माइनस रु २५ रहनेछ। सोहीअनुसार नै निगमले खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिने नीति रहेको छ।
नेपाल आयल निगमले संरक्षण सुरक्षा, गुणस्तर र प्रदुषण नियन्त्रणमा चासो दिँदै आएको छ। इन्धन सुुरक्षाको लागि ग्राहकरु पनि उतिकै सचेत हुन जरुरी छ। पेट्रोलियम व्यवसायीहरु निरन्तर रुपमा शिक्षित गर्नका लागि सबै चरणहरु पूरा गर्दै गइनेछ। साथै अन्य डिपोहरुलाई गुणस्तर तथा प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा ध्यान दिने गरिएको छ।
भूमण्डलीय तापमान बृद्धिलाई कम गर्न इन्धनको गुणस्तर तथा प्रदूषण नियन्त्रणलाई विशेषरुपमा उठान गरिन्छ। बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने पेट्रोल उत्पादनमा विशेष जोड दिँदै आएको निगमले विभिन्न संघ संस्था, नागरिक समाजसँग हातेमालो गरी प्रदुषण कम गर्ने उपायको लागि विशेष सतर्कताका साथ कार्य गर्दै आएको छ।
आइओसीको सहयोगमा नेपाल आयल निगमले आफ्ना सबै कर्मचारीहरुलाई गुणस्तर तथा प्रदुषण नियन्त्रण, आगलागी नियन्त्रण लगायतका ध्यान पुर्याउनुपर्ने विषयमा तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। जसले गर्दा इन्धन ओसारपसार तथा भण्डारणको क्रममा समेत दुर्घटनाबाट बच्नका लागि सावधानी अपनाउन सकिनेछ।
हरेक चरणमा इन्धनको गुणस्तर कायम राख्नको लागि अपनाउनुपर्ने सबै सावधानी निगमले अपनाउदै आएको छ। निगमका मुख्यका चासोका विषयलाई अझ प्रभावकारी तवरले कार्यन्वयन गर्न निगमले प्रदुषण नियन्त्रण विभाग छुट्टै सिर्जना गरेको छ। इन्धनको चेक जाँच गर्न केन्द्रीय प्रयोगशालाको निर्माण गरी आवश्यक अत्याधुनिक उपकरणहरुसमेत राखी परीक्षण गर्ने कार्य हुने गरेको छ।
Tagsआयल निगम स्वचालित मूल्य